Ampidino Mozilla Thunderbird ho an'ny Windows
Ampidino Mozilla Thunderbird
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (49.00 MB)
Ampidino Mozilla Thunderbird,
Mozilla Thunderbird, mpanjifa mailaka haingana, mahomby ary ilaina, dia vao mainka maniry fatratra miaraka aminireo endriny novolavolaina ho anny kinova vaovao.
Ny endrika mahavariana indrindra anny Mozilla Thunderbird, izay misy fanavaozana aminny fampifanarahana azy, ny fahombiazany, ny fampifanarahana tranokala ary ny fampiasana azy io dia ny fanokafana ny takelaka, iray aminireo endrika malaza indrindra aminny tranokala Mozilla Firefox, azo alaina ao aminny e- mail. Ny fikarohana haingana miaraka aminny sivana nohatsaraina, ny fitahirizana ary ny fametrahana tsotra miaraka aminny mpamosavy setup dia endri-javatra miavaka hafa.
Mozilla Thunderbird dia manasongadina: Mikaroka aminny alàlanny mailaka fampiroboroboana fanatsarana aminny mailakao; Azonao atao ny mikaroka aminny alàlanny mpandefa, tag, olona, ​​elanelam-potoana, fisie sy lisitra mailaka ary alefaso haingana izy ireo. Thunderbird, izay manisa ny mailanao rehetra ary manao izany aminny takelaka vaovao, dia hamela anao hahita izay tadiavinao haingana araka izay tratra.
Archive Your Mails Noho ny fisehonny arisiva, azonao atao ny mitahiry izay tianao tazomy aminny mailaka miditra ao aminny faritra arisiva. Aminizany no ahafahanao mitahiry ny Inbox anao nefa tsy manangona mailaka.
Fandefasana mailaka misaraka: Ny fisehoanny kiheba vaovao fantatrao tsara avy aminny navigateur Firefox dia nampiana ao aminny Thunderbird. Azonao atao ny manokatra mailaka tsirairay ao anaty takelaka iray aminny alàlanny fanindriana indroa aminireo mailaka. Rehefa manidy ny programa ianao, ireo takelaka izay mijanona misokatra dia ho voatahiry ary hisokatra aminny fanombohana manaraka. Ity fampiasa ity dia ahafahanao mizaha haingana ny mailaka rehetra. Auto-complete miaraka aminny Fikarohana Iraisam-pirenena dia hanampy anao hahita ny mailaka miaraka aminny endri-javatra vita aminny alàlanny boky adiresy Thunderbird mandritra ny fikarohana ao aminny sahanny Fikarohana Global. serivisy mailaka be mpampiasa indrindra any Thunderbird miaraka aminny mpamosavy fandefasana mailaka vaovao. Ny sisa ataonao dia ny mampiditra ny anaranao, ny mailaka ary ny teny miafinao. Hanampy ho azy ny mailaka aminny programa ho anao ny mpamosavy.Fitaovana famolavolana endrika vaovao ity faritra ity dia azo ampiana aminny alàlanny fanampiany bokotra toy ny valiny, hamafa, handroso eo aminny baraovana, izay misy koa ny bara fitadiavana Global Search.
Smart Files miaraka aminity endri-javatra ity dia azonao atao ny manambatra ny mailaka aminny kaonty imailaka isan-karazany ao anaty rakitra iray arakaraka ny toetrany. Famintinana ny mailaka vaovao Fisafidianana mailaka mihoatra ny iray dia tsy mahita afa-tsy ny famintinana. ny kaonty mailakao sy Thunderbird ho anao ary ahafahanao mitantana azy ireo aminny faritra iray .Mpiovaova Addon ManagerNy mpitantana addon dia afaka mahita sy mametaka ny addons sy ny lohahevitra rehetra anny Mozilla Thunderbird 3 ho anao. Thunderbird, izay misy lohahevitra sy plugins maro samihafa ho fanaingoana, dia mamela anao handamina ireo fiasa ireo aminny mpitantana tokana.
Boky adiresy nohatsaraina Azonao atao ny manitsy ny mombamomba ny olona ao aminny bokinny adiresinao aminny tsindry iray. Ny tsindry iray dia ho ampy hanampiana olona aminny bokinao. Ho fanampinizany, manomboka izao dia hanaraka ny fitsingerenanny andro nahaterahanireo olona ao aminny bokinao adiresy ho anao ny Thunderbird. Fanatsarana ny fampidirana Gmail Ny programa, izay natambatra taminny Gmail, dia miasa mifanaraka aminireo kaonty Gmail aminny fiteny rehetra, manome fampitambarana marimaritra iraisana eo aminireo rakitra .
Fiarovana aminny phishing: ny rafitra fampandrenesana phhunderbird phishing dia miaro anao aminny mailaka sandoka izay manandrana maka ny mombamomba anao sy tsiambarateloo. Ho fisorohana faharoa dia mampahafantatra anao ireo URL izay tsindrio ianao hanokafana nefa hanokatra aminny toerana hafa ankoatry ny fisehoanizy ireo. Ireo fanavaozana ny fiarovana ireo dia kely (matetika 200 KB - 700 KB) ary manome anao izay ilainao ihany, mamela ny fanavaozana ny fiarovana alaina sy apetraka haingana. Thunderbird dia nohavaozina aminny fiteny 30 mahery mihodina aminny Windows, Mac OS X ary Linux aminny alàlanny rafitra fanavaozana mandeha ho azy.Fampitaovana ny mpampiasa InboxThunderbird dia afaka manitatra ny fahaizani Thunderbird ary manova ny fisehoany aminny add-on an-jatony. Ny add-on anny Thunderbird dia afaka manampy anao aminny faritra samihafa toy ny fitandremana ny fifandraisana, ny fanaovana antso an-tariby aminny alàlanny IP, ny fihainoana mozika ary ny fitandremana ny fitsingerenanny andro nahaterahana ao aminny bokinao. Azonao atao koa ny manova ny fisehonny Thunderbird mba hifanaraka aminny tsironao.
Trash Out ... Mozilla dia nanao dingana iray lavitra taminny alàlanny fanatsarana ny sivana malaza aminny Thunderbird. Ny mailaka rehetra azonao voalohany dia mandeha aminny sivana spam anny Thunderbird. Isaky ny manome saina spam ianao dia mianatra azy ny Thunderbird ary manatsara ny sivanany rehefa mandeha ny fotoana. Ka ny mailaka mandeha fotsiny no vakianao. Thunderbird koa dia mampiasa sivana spam anny mpanome tolotra mailaka hitazonana ny boaty fampidirana anao tsy ho fako. Ny tsipika fisokafanay sy ny vondronolona manam-pahaizana mavitrika dia miantoka fa azo antoka kokoa sy havaozina haingana kokoa ny vokatra,Izy io koa dia ahafahantsika manararaotra ireo fitaovana fanaraha-maso sy fanombanana tsara indrindra natolotry ny antoko fahatelo, izay hanatsara ny filaminana ankapobeny.
Haben'ny rakitra: 49.00 MB